Fashion Archives - Lifestyle Myanmar
သင့်ရဲ့ အရောင်ရွေးချယ်မှုပေါ် မူတည်ပြီး သိရှိနိုင်မယ့် သင့်စိတ်ခံစားချက်
အကယ်လို့များ သင်က အဖြူရောင်ခရေဇီမို့ တခြားအသုံးအဆောင်တွေအပြင် ဖိနပ်ကိုလည်း အဖြူရောင်ရှူးမှ ဝယ်စီးတတ်သူဆိုရင် ညစ်ပေသွားတဲ့အခါတိုင်း ဖိနပ်အရောင်ပြန်ပေါ်လာအောင် သေသေချာချာ သန့်စင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကိုတော့ သိထားသင့်ပါတယ်။ ဒီနေ့ရဲ့ဆောင်းပါးကနေပြီး ပြောပြပေးသွားချင်တာကတော့ သင့်ဖိနပ်အဖြူတွေကို အသစ်နီးနီး အရောင်ပြန်တက်လာစေဖို့ လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရှူးဖိနပ်အဖြူတွေက ဘယ်ဖက်ရှင်နဲ့တွဲဝတ်ဝတ် လိုက်ဖက်လွန်းတာမှန်ပေမယ့်လည်း အညစ်အပေမခံလွန်းတာကိုလည်း သိထားရပါမယ်။ ဒီနည်းလမ်းလေးတွေကတော့ လွယ်လည်းလွယ်၊ မြန်လည်းမြန်ပြီး အင်မတန်မှလည်း အသုံးဝင်တာမို့...
နားကပ်တွေက အမျိုးသမီးများစွာအတွက် အရေးကြီးသော လက်ဝတ်ရတနာ အဆင်တန်ဆာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ကိုယ့်မျက်နှာကျနဲ့ လိုက်ဖက်မှုရှိတဲ့ နားကပ်မျိုးကို ဝတ်ဆင်တတ်မှသာ ကိုယ်ရဲ့နဂိုရှိရင်းစွဲအလှကို ပေါ်လွင်စေမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဘယ်လိုမျက်နှာကျမျိုးဆို ဘယ်လိုပုံစံလေးတွေ ဝတ်သင့်လဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ လေးထောင့်မျက်နှာကျ နဖူး၊ မေးရိုးနဲ့ ပါးတို့က အကျယ်အားဖြင့် တူညီတာမျိုးပါ။ ဒီလိုမျက်နှာကျရှိသူတွေဟာ နားကပ်အဝိုင်း၊ နားကွင်းတွေနဲ့ ဇာရံနားကပ်လေးတွေကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်...
2022 ခုနှစ်အတွက် အရမ်းခေတ်စားနေတဲ့ hair dye trends (၄)မျိုး
လအနည်းငယ်ကြာတိုင်း ဆံပင်ကာလာပြောင်းတတ်ကြတဲ့ ဆံပင်ပုတ်သင်ညိုလေးတွေကတော့ သူတို့အတွက် ဘာအသစ်အဆန်းတွေ ထပ်လာဦးမလဲဆိုာတ စဉ်းစားထားပြီးသား ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊။ ပျိုမေလေးတို့လည်း ဆံပင်အရောင်ဆိုးချင်တယ်၊ ဘာအရောင်ဆိုးရမှန်းမသိသေးရင် ခေါင်းပူမခံပါနဲ့။ ၂၀၂၂ အတွက် စင်ကာပူနဲ့ အာရှတွေမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ hair dye အသစ်တွေကို မျှဝေပေးမှာပါ။ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရောင်လေးတွေ စမ်းဆိုးကြည့်ပေါ့နော်။ ၁။ ပခုံးအထိရှည်တဲ့ ဆံပင်လေးတွေဆိုရင် Earloop highlight ဖောက်ပါ “tuck-in...
သင့်မျက်နှာ ပုံစံနဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် အကောင်းဆုံးဦးထုပ် ဒီဇိုင်းကို ရွေးချယ်နည်း
ဦးထုပ်တွေက ယခုအချိန် နွေရာသီအစပိုင်းမှာ အလွန်ရေပန်းစားနေတဲ့ အတွက် အချို့လူတွေအတွက် မှန်ကန်တဲ့ ဦးထုပ်ဒီဇိုင်းကို ရှာဖွေဖို့လိုပါတယ်။ မျက်နှာပုံစံအရ အကော်းဆုံးဦးထုပ်ကို ရွေးချယ်ရတာက ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ လိုက်ဖက်မယ့် ဦးထုပ်ကို ရှာတွေ့ဖို့က ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံးအတွက် လိုအပ်တဲ့ ရှာဖွေမှုပါ။ ဦးခေါင်းက လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ အထင်ရှားဆုံး အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်တဲ့အတွက် ရွေးချယ်မှု မှန်ကန်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဦးထုပ်တွေက စတိုင်ကျရုံသာမက...
လူကောင်သေးတဲ့ ကောင်မလေးတွေအတွက် ချစ်စရာကောင်းနေစေမယ့်ဖက်ရှင်များ
ခန္ဓာကိုယ် သေးသေးသွယ်သွယ်ရှိတဲ့ မိန်းကလေးတို့ရေ …ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က ပိန်ပိန်သွယ်သွယ်လေး ဖြစ်နေလို့ ၊ လူကောင်သေးနေလို့ စိတ်မညစ်ပါနဲ့နော်။ ပိန်ပိန်သွယ်သွယ်လေး ဖြစ်နေပေမယ့် Outfits လှလှလေးတွေသာ ဝတ်လိုက်ရင် အရမ်းလှပတဲ့ မိန်းကလေး ဖြစ်နေမှာ သေချာပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစား သေးသွယ်တဲ့ ကောင်မလေးတွေနဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် ဖက်ရှင်လေးတွေကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ #Lifestyle_Myanmar #LM_Nandar
အံဆွဲတွေ၊ ဗီဒိုတွေမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ရနံ့တွေ ဘယ်လိုဖန်တီးကြမလဲ?
အိမ်ရှင်မတွေ အိမ်မှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အကြီးမားဆုံး ပြဿနာတွေထဲက တစ်ခုကတော့ အနံ့အသက်ဆိုးတွေပဲ ဖြစ်မှာပါနော်။ အထူးသဖြင့် ပိတ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အဝတ်အစားတွေက အရမ်းတန်ဖိုးကြီးတယ်။ ကိုယ်က နေ့တိုင်းသန့်သန့်လေးနဲ့ အနံမွှေးနေတဲ့ အဝတ်အစားတွေကို ဝတ်ရတာ ကြိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအဝတ်တွေကို အချိန်အကြာကြီး အသုံးမပြုဘဲထားတာမျိုး (သို့) အစိုဓါတ်ပြန်တာမျိုး (သို့) ပိုးဟပ်ဝင်တာမျိုးဆိုရင် အနံ့ဆိုးတွေ ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။...
အရပ်ရှည်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် အလိုက်ဖက်ဆုံးဘောင်းဘီတွေက ဘာတွေလဲ?
အရပ်ရှည်ခြင်းမှာ အားသာချက်၊ အားနည်းချက် နှစ်မျိုးလုံးရှိပါတယ်။ အားသာချက်ကတော့ ကုတ်အင်္ကျီရှည်တွေကနေ ဘလောက်အင်္ကျီတွေအထိ အရာအားလုံးက သင့်နဲ့ ကြည့်ကောင်နေတာပါ။ အားနည်းချက်ကတော့ အရပ်ရှည်တဲ့ မိန်းကလေးအများစုဟာ သူတို့ရဲ့ ရှည်လျားပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ခြေထောက်တွေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ဘောင်းဘီကို ရှာဖို့ အခက်အခဲရှိကြတာပါ။ဒါ့ကြောင့် အရပ်ရှည်တဲ့ မိန်းကလေးတွေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့၊ ခြေချင်းဝတ်ကျော်တဲ့ ဘောင်းဘီတွေ ရှိတယ်ဆိုတာကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ သင့်ရဲ့sexy...
သင့်ရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကို ပိုကြည့်ကောင်းစေမယ့် အကြံပြုချက် (၅) ချက်
ကျွန်မတို့မိန်းကလေးတွေက ဗီရိုရှေ့ရပ်ပြီး ဒီနေ့ဘာတွေဝတ်ရမလဲဆိုပြီး စဉ်းစားနေရတာက တစ်ကြိမ်တည်းမကတာတော့ သေချာပါတယ်။ ဒီလိုနေ့စဉ်ရုန်းကန်မှုက တစ်ခါတလေမှာ အလွန်ခက်ခဲနိုင်ပြီး ဒီရုန်းကန်မှုကို ပိုမိုလွယ်ကူစေဖို့နှင့် ပျော့ပျောင်းစေဖို့ အကူအညီတစ်ချို့ပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ အင်္ကျီအထုံး တစ်ခါတလေမှာ ကျွန်မတို့ အလျင်လိုနေတဲ့အခါ ရှပ်အင်္ကျီကို ဖြစ်သလိုချည်လိုက်ပြီး ကြည့်ကောင်းရဲ့လား မစစ်ဆေးဘဲ ချည်နှောင်ထားမိသလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပေါ့လျော့တယ်လို့ ထင်ရနိုင်တာမို့ အကြံပြုချက်အနေနဲ့ အင်္ကျီစနှစ်ဖက်စလုံးကို ဟိုဘက်ဒီဘက်ညီနေအောင် စနစ်တကျချည်သင့်ပါတယ်။ ၂။...
သင့်အခန်းကို ခေတ်ဟောင်းစတိုင်မျိုးဖြစ်အောင် ဘယ်လိုအလှဆင်မလဲ?
ဒီဇိုင်းလောကမှာ vintage style ဆိုတာက အချိန်ကြာလာတာနှင့်အမျှ တန်ဖိုးတက်လာတဲ့ ဘယ်ပစ္စည်းကိုမဆို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ vintage ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းက ဒီဇိုင်း၊ ဖက်ရှင်နဲ့ အလှဆင်ခြင်းလောကကို လုံးလုံးလျားလျား ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း vintage style လေးတွေက အဝတ်အစားဖက်ရှင်မှာ ခေတ်စားလာသလို အိမ်အလှဆင်တဲ့ နေရာမှာလည်း ခေတ်စားလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ သင့်အခန်းကို ခေတ်ဟောင်းစတိုင်မျိုး အလှဆင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာ သွားရှာစရာမလိုပါဘူး။...
မိန်းကလေးတိုင်းအတွက် ချစ်ဖို့ကောင်းပြီး လွယ်ကူလျင်မြန်တဲ့ ဆံပင်ပုံစံ ၆ ခု
ဆံပင်ဆိုတာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးအထားရဆုံးအရာတစ်ခုအဖြစ် ယနေ့အချိန်ထိ သတ်မှတ်နေကြတုန်းပါ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အလှအပနဲ့ ဆံပင်ပုံစံကို ဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့အခါမှာလည်း သဘာဝပုံစံဘက်ကို ရွေးချယ်နိုင်သလို ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဆံပင်ပုံစံနဲ့လည်း နေချင်ကြပါတယ်။ ဆံပင်ပုံစံရွေးချယ်ရတာက အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းဖြစ်ပြီး မိန်းကလေးတွေအတွက် စိန်ခေါ်မှုအကြီးဆုံး အချိန်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ ဆံပင်အကောက်လှိုင်းကြီးကြီး ပျော့ပျောင်းပြီး ဆံသားအကောက်လှိုင်းကြီးကြီးတွေက သင့်ကို ဘယ်ပွဲမဆို စိတ်ကြိုက်နဲ့ အမြဲတမ်းလှပနေတဲ့ ပုံစံကို ရရှိစေမှာပါ။...